Duulimaadyada Moscow ilaa Hurghada iyo Sharm El Sheikh ee Aeroflot hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada Moscow ilaa Hurghada iyo Sharm El Sheikh ee Aeroflot hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Masar • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Sida ku cad jadwalka la shaaciyey, Aeroflot waxay maalin walba ka duuli doontaa Moscow ilaa Hurghada iyo Sharm el-Sheikh, laga bilaabo Oktoobar 1, 2021.
Markab sidda calanka Ruushka ayaa ku dhawaaqay duulimaadyo la qorsheeyay in lagu tago magaalooyinka loo dalxiis tago ee Badda Cas ee Masar.
Aeroflot ayaa maalin walba ka howlgali doonta duulimaadyada Hurghada iyo Sharm el-Sheikh.
Duulimaadyada Hurghada iyo Sharm el-Sheikh ee Aeroflot ayaa ka shaqeyn doona Moscow.
Shirkadda Aeroflot ee calanka Ruushka ayaa maanta shaacisay inay bilowday iibinta tigidhada duulimaadyada rakaabka tooska ah ee jadwalka u ah Moscow, Russia ee loo dalxiis tago Badda Cas ee Hurghada iyo Sharm el-Sheikh.
Sida ku cad jadwalka la shaaciyay, Aeroflot waxay ka duuli doontaa Moscow hal diyaarad Hurghada iyo Sharm el-Sheikh maalin kasta, laga bilaabo Oktoobar 1, 2021.
Tan iyo 27-kii Ogosto, Ruushku wuxuu labanlaabay tirada duulimaadyada joogtada ah ee Masar ee waddooyinka Moscow-Hurghada iyo Moscow-Sharm el-Sheikh-laga bilaabo 5 illaa 15 duulimaad toddobaadkii waddo kasta kadib go'aanka xarunta hawlgalka federaalka ee la-dagaallanka COVID19.
Sida laga soo xigtay Wakaaladda Gaadiidka Cirka ee Federaalka, sagaal shirkadood oo diyaaradeed, oo ay ku jiraan Aeroflot, waxay heleen fursad ay ku shaqeeyaan duulimaadyada waddooyinkan, marka lagu daro Rossiya. Markii hore, Aeroflot si joogto ah uma aysan duulin duulimaadyadan.
PJSC Aeroflot - Russian Airlines, oo loo yaqaan Aeroflot, waa side calanka iyo diyaaradda ugu weyn ee Xiriirka Ruushka. Diyaaradda waxaa la aasaasay sannadkii 1923 -kii, taasoo Aeroflot ka dhigtay mid ka mid ah duullimaadyada ugu fir -fircoon adduunka.
Aeroflot waxay xarunteedu tahay Bartamaha Maamulka Okrug (Degmo), Moscow, oo xarunteedu tahay Madaarka Caalamiga ah ee Sheremetyevo. Diyaaradda ayaa u duushay 146 goobood oo ku kala yaal 52 waddan, marka laga reebo adeegyada la wadaago.